केप भर्डेमा अनलाइन क्यासिनोहरूको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा।
शीर्ष १० केप भर्डे अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० केप भर्डे अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
२०० 2005 देखि केप वर्डेमा जूवालाई कानुनी मान्यता दिइएको छ, यद्यपि पहिलो कानुनी जुवा सुविधा २०१२ मा मात्र खुलेको छ। केप वर्डेमा जुवालाई नियमन गर्ने कानून भनेको क्यासिनोस ई सलास डे जोगोस हो। यस ऐनको साथ अनुसार, टापुहरूमा जूवा भनेको केही तोकिएको जुवा क्षेत्रहरूमा मात्र कानुनी हुन्छ, जुन or वा hotels-तारे होटेलहरूमा अवस्थित हुनुपर्दछ।
यी तोकिने जुवा क्षेत्रहरू कि त स्थायी वा अस्थायी हुन सक्छन्। यस समयमा त्यहाँ is टापुहरू छन् जुन स्थायी रूपमा जुवा क्षेत्रहरू: स्यान्टियागो, एस भिन्सेन्टे, साल, बोविस्टा र माईओ। देशको पहिलो क्यासिनो साल्टा टापुको सान्ता मारिया शहरको क्यासिनो रोयल थियो।
सबैमा, केप भर्डे - वा पोर्तुगालीमा क्याबो भेर्डे - १० ज्वालामुखी टापुहरू समावेश गर्दछ र पश्चिमी अफ्रिकाको तटमा करीव 10० किलोमिटर अवस्थित छ। यद्यपि यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको तुलनामा केप भर्डेले असाधारण राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक मजबुतता देखाउँदछ। टापुमा इन्टरनेट प्रवेश दरले यो दर्साउँछ: 570०% भन्दा बढी जनस the्ख्या इन्टरनेटमा पहुँच छ।
२०१ 2015 भन्दा पहिले, केप भर्डेको जुवा नियमहरुमा अनलाइन जुवाको बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको थिएन। अनलाइन जुवाको कानुनी स्थिति अस्पष्ट छ किनकि निर्धारित जुवा क्षेत्रबाहिर केप भर्डेमा जुवा निषेध गरिएको छ, तर कुनै खेलाडी वा अपरेटरहरू अनलाइन जुवाको लागि मुद्दा चलाइएको छैन।
एक साँचो क्यासिनो क्लासिक हुनु, रूले क्यासिनो फ्यानहरूको बीचमा ठूलो लोकप्रियता पाउँदछ, विशेष गरी इन्टरनेटमा। प्रत्येक एकल ब्रिटिश जुवा साइटले खेलको कम्तिमा एक दर्जन भिन्नता प्रदान गर्दछ, रौलेट फ्यानहरूको लागि खेल्नको लागि एक ठाउँ छनौट गर्दछ। यसैले मैले यो साइट सिर्जना गर्ने निर्णय गरें - मेरो ज्ञान र यसलाई प्रदान गर्ने क्यासिनोको बारेमा मेरो ज्ञान बाँड्न, र दुबै नयाँ र अनुभवी खेलाडीहरूले अनलाइन खेल्नको लागि नयाँ नयाँ अवसरहरू फेला पार्न मद्दत गर्नुहोस्। मैले rou० भन्दा बढि राम्राटा साइटहरू राम्रोसँग परीक्षण गरेको छु UK र मैले यो सबै देखेको छु। त्यसैले मलाई विश्वास गर्नुहोस् जब म भन्छु कि तल सूचीबद्ध १० क्यासिनो crème de la crème हो!
शीर्ष १० केप भर्डे अनलाईन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 4, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० केप भर्डे अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० केप भर्डे अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
शीर्ष १० केप भर्डे ...